RIP Hal Laptop ah Ilmihiiba | Laga soo bilaabo Linux
Gabadha yar ee reerka
Dayrka iyo jikada
Iyadoo webi iftiin leh
Madaxa ayaad shiday
Taasi ma fileynin wax lala yaabo
Sonkortaadu way na macaanaysay
Iyo waliba kookahaaga
Aayadahani way yaryihiin
Taranka iyo amaanta
Lagu beeray berrinka
Meel walba waad ku barbaartay
Iyada oo leh kumbuyuutarkaaga jilicsan
Waan tabi doonaa waxbarasho
"Elegy to the ceibalita" oo uu qoray Titu Naburu. Waxaa lagu daabacay liisanka CC BY-SA.
Haddana zamba, oo loogu heesi karo muusigga "Añoralgias" (labada nooc ee Les Luthiers iyo Los Chalchaleros labaduba way u adeegaan)
Zambaani gabay kalgacal weyn
ilaa mashruuc laga bilaabo 10 sano ka hor,
kacaan u ah dadka kale.
Laptob cunug walba.
Maantana waan barooranayaa gabaygayga
maxaa yeelay waxay ku qayliyeen: "Mar dambe sii socon maayo" (MAYA SI AAD UGU DANBEYN).
Weli waan xasuustaa: 100 cambe oo cagaar ah, (ama laba boqol)
haysashada netbook waxay ahayd waalli,
inkasta oo la Linux ay amaan ahayd.
Caruurta ardaydu way faraxsanaayeen.
Isku day, waxaan leeyahay, waxba lumaya,
in kasta oo aanu qurux lahayn.
Laakiin kor u kaca kiniiniyada ayaa yimid,
fikradaha la'aantu waxay noqdeen kuwo dilaa ah.
In kasta oo iibkiisu uusan ahayn mid aad u xun,
waxay diiradda saaraan qalabka rakhiis ah oo xasilloon, (si fiican)
mashruucu wuxuu noqday mid nugul
fadhiistay oo weli, sida zeibal.
Wuxuu nooga tegey dhammaan noocyada miraha,
en Hindiya, Rwanda ama Uruguay.
Oo inkasta oo aan ogahay cilladaha jira inay jiraan
(Waxaan dooneynaa lacag badan oo machadyada ah),
Waxaan soo jeedinayaa, xoogaa qallafsan:
arday kasta, Raspberry Pi.
Macallimiin si wanaagsan u soo baxay oo tababaran,
ciyaaro xiiso badan iyo qorshooyin wanaagsan.
Isku xirnaanta wanaagsan, mudane,
Inta udhaxeysa Qorshaha, iskuulada, waalidiinta iyo ardayda,
gudaha Montevideo iyo meel kasta,
OO AAN LAGU DHUFAN LAHAYN QORAYAASHAAS (Waan qasbay qaafiyadda).
Marka talooyinkani ka faa'iideystaan,
isdeji, saldhig waad leedahay,
taas oo ay ku faani lahayd in wax la barto
oo dharbaax caanihan xun. (Way dhamaatay)
Waan baxayaa waana ka faaiidaysanayaa.
Cusbooneysiin: Ma dhiman. Waxaan ahaa xaflad.
OLPC sidoo kale waxay gacan ka siisay qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada softiweerka iyo horumarka maxaa yeelay ururku wuxuu noqonayaa mid aad u qalabaysan iyo agnostic OS, oo xooga saaraya qiimaheeda asaasiga ah - waxbarashada
Marka: Noolaada hal Laptop-kii cunug kasta iyo dhaxaltooyadooda, Raspberry Pi, Arduino iyo casriga ah oo leh Firefox OS
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » RIP Hal Laptop cunug kasta
Maxaa heeb ah ????
iyo inaan ahay reer Uruguay….
Ku jawaab yorugua
Taasi waa waxa aan tixraacayo.
Ma dhihi karno taasi asal maaha.
Waan ka helay.
Jawaab Hugo Iturrieta
Waa inaad raacdaa xiriiriyeyaasha si aad u fahanto, aragtida koowaad ee wareerinta aragtida labaad ee asalka ah
Jun 12 dijo
Argentina dhexdeeda, waxay ku sii socotaa in ka badan 3.500.000 oo netbook la keenay iyo hoos u dhac aad u muhiim ah oo ku yimid kala qaybsanaanta dhijitaalka ee dalka, marka lagu daro haysashada warshadaha software ee ugu xoogan Latin Amerika.
iyagu mar dambe ma bixiyaan, waxay keenaan netbook oo keliya
Si kale haddii loo dhigo, Qorshaha Ceibal wuu sii shaqeynayaa. Laakiin mustaqbal malahan XO (oo halkan aan ugu yeerno iyaga ceibalitas), waana taas waxa elektarkayga leeyahay.
Waa heer sare !!!!